आज बिहान नियमित वाकमा निस्किए देखि नै बुढानीलकण्ठबाट लगनखेल कसरी जाने भन्ने प्रश्न मनमा आइरहेको छ । लगनखेलस्थित भीएफएस ग्लोबल नेपालको अफिसमा जानु पर्ने छ ।
हिजो त्यहाँबाट पासपोर्ट लिन बोलावट आएको छ । स्थानीय युनिभर्सल कन्सल्ट्यान्सीको सहयोगमा क्यानडाको भिजिटिङ भिषाका लागि १५ दिन अघि निवेदन दिएको थिएँ । मेरो निवेदनलाई सो अफिसले दिल्लीस्थित क्यानेडियन उच्च आयोगमा पठाएको थाहा थियो । केही बर्ष अगाडि युकेको भिषाका लागि निवेदन दिँदा यो अफिस नक्सालमा थियो । बुढानीलकण्ठ बस्ने मलाई नक्सालबाट लगनखेल सर्दा गाह्रो हुने नै भयो । अर्को कुरा, पासपोर्ट लिन बोलाउँदा भिसा पाइएको वा नपाइएको थाहा हुँदैन । अनि यहीँबाट शुरु हुन्छ कौतुहुलता र तनाव । अलिकति हतार पनि हुन्छ । पासपोर्ट लिन खाना खाएर जाने निश्चय गरेँ ।
हप्ता दिन पुगेको छैन, एउटा बैंकको सिईओबाट अवकास लिएको छु । अफिसको गाडी र ड्राइभर छैन । जागीर गएकोमा चिन्ता नभए पनि यातायातको असुविधाले नराम्रोसँग दुःख दिन थालेको छ । सुविधै सुविधामा बाँच्नु वास्तवमै असल जीवन हैन रहेछ । पासपोर्ट लिन जाने कुनै ठुलो काम त होइन । तर, सुविधामा बस्ने रोग लागेकोले होला, मलाई भने महाभारत भइराखेको छ । मर्निङ वाक गर्दै बुढानीलकण्ठबाट लगनखेल जानका कुन साधनबाट जाने होला भनेर सोच्न थालेँ ।
घरमा थोत्रो कार छ । तर, हाँक्ने ड्राइभर छैन । चार वर्ष अरुले हाँकेको गाडी चढ्ने बानी पर्‍यो । अब गाडी हाँक्ने आत्मबिश्वास हराएछ, शहरमा पार्किङको झञ्झट उस्तै छ । फेरि गैर जिम्मेवारीपूर्ण हँकाइको थलो हो काठमाडौंको सडक । पहिलो विकल्प यही थियो जसमा मैले टिक लगाउन सकिन । दोश्रो विकल्प हो, ट्याक्सी । तर, काठमाडौमा ट्याक्सी जो पायो उसले चढ्न सक्दैन । रित्तो ट्याक्सीको नजिक उभिएर ड्राइभरलाई पहिले त ‘खाली हो ?’ भनेर सोध्नु पर्छ ।
सिधा जवाफ आउँदैन, आडम्बरपूर्ण तरिकाले अन्त तिर हेर्दै ड्राइभरले सोध्छ, ‘कहाँ जाने ?’ । मानौ कहीँ जानको लागि मात्र खाली छ, अन्त जान खाली छैन ट्याक्सी ।
म भन्नेछु, ‘लगनखेल’ । यसपछि उसले जुन प्रश्न सोध्ने छ, त्यसको जवाफ दिन मलाई गाह्रो हुनेछ ।
भन्छ, ‘कति दिनुहुन्छ?’ ।
मिटरमा भन्ने कुरै छैन । अनि शुरू गर्नुपर्छ बार्गेनिङ जुन मलाई निकै असजिलो लाग्छ । त्यसैले अर्जेन्ट नपरीकन ट्याक्सी चढ्दिन । नत्र पाँच सातसय रुपैयाँ साथमा नहुने भन्ने हुँदैन ।
तेश्रो विकल्प टुटल छ,जसले मोटरसाइकलमा सजिलै गन्तव्यमा पुर्‍याइदिन्छ, सुनेको यही हो । तर अहिलेसम्म उपयोग गरेको छैन । क्यानडा जानु अघि भाञ्जा तपन हमालले मेरो मोबाइलमा टुटुल एप्स डाउनलोड गरेर चलाउने तरिका पनि सिकाएका थिए। । त्यसैबाट टुटलको दर – बुढानीलकण्ठबाट लगनखेल कति रहेछ भनेर हेरेँ । रू. ३५४ देखायो । एकतर्फी मोटरबाइकको भाडा अलि बढी नै लाग्यो । त्यसैले ‘कन्फर्म बुकिङ’ को बटन दबाइन् ।
चौथो विकल्प हो, सार्वजनिक बसको यात्रा । दुई ओटा बस चढ्नु पर्ने, बुढानीलकण्ठबाट रत्नपार्क र रत्नपार्कबाट लगनखेल । पहिलो स्टपबाट चढ्दा बसमा सिट पाइन्छ, रत्नपार्कबाट लगनखेल जाने बसको अवस्था थाहा छैन । बस समात्न दौडादौडी गर्न पर्ने हो कि ? त्यस्तो म कहिलेकाहीँ अफिसको गाडिमा घर फर्किदा देख्ने गर्थेँ । अलि पहिले एउटा प्रसङ्गमा बिहान मर्निङवाकमा ब्रह्मदेव सर (स्थानीय मित्र) ले ‘साझा बस सिधै लगनखेल जान्छ’ भनेका सम्झिएँ । तर कुन कुन बेलामा साझा बस हिड्छ भन्ने उनलाई पनि थाहा रहेनछ । मलाई लाग्यो, २–३ घण्टामा एउटा आउला, थोरै छ साझा बस । घरबाट हिडेको समय नमिलेर साझा बसको लागि दुई घण्टा कुर्न पर्ने हुन सक्छ । साझा हैन, अरु बसमा यात्रा गर्ने विचार गरेँ ।
खाना खाएर निस्किएँ, घरबाट बाहिर सडकमा, हातमा आइप्याड र तार लिएर । बसमा सिट पाइने निश्चितताले सिनेमा हेर्दै जाने सोचेँ । आइप्याडमा हिन्दी र अंग्रेजी सिनेमाहरु सेभ थिए । कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज होटेल नजिकै मेरो घर छ । सडकमा पुगेर दाहिनेतिर हेर्दा बस स्टपमा साझा बस लागिरहेको देखेँ । यो प्लिज्यान्ट सर्प्राइज भयो मलाई । पार्क भिलेज होटेल नजिकै बसेर कुर्ने कि बस स्टपमै गएर साझा चढ्ने भन्ने दोधारमा परें। दुई मिनेटको बाटो हो, फटाफट बस स्टपतिरै लागेँ । यसो गर्दा हिँडाइ पनि हुने, सिट पाइने निश्चित पनि हुने । दोहरो फाइदा लिन किन चुक्ने ?
कोट लाउँदा–लाउँदा थाकेको थिएँ, त्यसैले आज कोट नलाएर निस्किएँ । ड्रेस कोडले बाँधेको बैंकका सिइओको व्यक्तित्वसँग कोटको अन्योन्याश्रित सम्वन्ध छ । तर, लेखकलाई कोट चाहिदैन । साँचो भन्ने हो भने एउटा लेखकको जीवन कोट बिना नै चल्छ । कुनै लेखक रुप र पहिरनबाट हैन, उसको सिर्जनाबाट चिनिन्छ । तर, यथार्थ यो छ कि म लेखक भइसकेको छैन, प्रयासरतसम्म छु । लेखकको लागि पहिलो शर्त हो, जतिसुकै खतरनाक भए पनि सत्यलाई नलुकाई भन्नु । तर, बैंकको व्यबस्थापन गर्न पर्दा कहिलेकाहीँ सत्यलाई लुकाउनु सिइओको बाध्यता हुन सक्छ । जे भए पनि सत्य यो हो आजको दिनमा सामान्य मान्छे भन्दा मेरो अर्को परिचय छैन । सामान्य मान्छेको लागि कोट भन्दा चैत्र महिनामा हल्का ज्याकेट उपयुक्त हो, यसै गरेँ मैले ।
भर्खरै जागीरबाट अवकास लिएकोले होला, कोट नलगाइ हिड्दाको मजा अर्कै भयो । हरेक दिन कोटको पहिरनले मेरो खास एउटा आइडेन्टिटी बनेको थियो, लेखनाथको दारी जस्तो । दारी नभएको कवि शिरोमणीको फोटो कतै देखियो भने चिनिन्छ र ? कोट नलगाउँदा आइडेन्टिटीको संकट भए पनि आफ्नो इमेजमा भने फरक नपर्ला भन्ने आंकलन गरेँ । एउटा कुरा भने छ, बैंकको सिइओको जबमा एक खाले तनाव त थियो, जसलाई मैले न्यून तहमा राख्ने प्रयास गरेँ । तर, कम्फोर्ट जोनमा बस्ने बानि परेकालाई कहीँ जान पर्दा कसरी कुन साधनमा जाने भन्ने सानो चिन्ता चाहिँ हुन्छ । सानै काममा शहर गएपछि दिन भर जान्छ । समयको यो बर्बादी अर्को चिन्ता हो ।
म साझा बस चढेँ । सिट पाएँ । बस गुड्न थाल्यो । तर एकै छिनमा रोक्कियो । यसपछि छिनछिनमा रोक्किन थाल्यो, यसको कुनै निश्चित स्टप त छैन । सडक सबै स्टपै स्टप त हुन् नि । हात्तिगौडाबाट एक्कासी ३०/३५ बर्षकी महिला बसमा उक्लिन् र मसँगै बसिन् ढसमस्स । उनको अनुहारमा महसुरपन देखिन्थ्यो, कुनै राजनीतिक दलको जुझारु कार्यकर्ता हुन् कि ? यी महिला त्यसरी सँगै बस्ना साथ एक प्रकारको असजिलो लागेर आयो मलाई ।
‘मि टु’ को आन्दोलन संसार भरी चलिरहेछ, नेपाल पनि त्यसको प्रभाव पसिसक्यो । कुनै महिलासँग नजिक हुँदा विगतको विपरित असजिलो मान्नु पर्ने युगको प्रारम्भ भएको छ । बसमा मसँगको सामिप्यताबाट उनीले असजिलो मानिन् भने मेरो राम्रै जात्रा शुरु हुन सक्छ । आजसम्म जुन इज्जत कमाएको ठानेको छु, त्यो त क्षणभरमै खरानी हुनेछ । यसका अतिरिक्त के के हुने हो, निश्चित छैन ।
संसारकै महान इन्भेष्टर बर्कशायर हाथवेका अध्यक्ड तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ८८ बर्षीय वारेन बफेटले पनि भनेका छन्,‘प्रतिष्ठा कमाउन २० बर्ष लाग्छ, तर त्यसलाई खत्तम पार्न एक मिनेट नै काफी हुन्छ’ । यस्तै अप्रिल ४, २०१९ को न्यूयोर्क टाइम्समा एउटा न्युज आइटेम थियो– अमेरिकी पूर्वउपराष्ट्रपति जोय बाइदेनको महिलाको कुममा छुने बानीका बारेमा । महिलासँग हग गर्दा उनले आवश्यक भन्दा अलिकति बढी समय पनि लगाउँने गरेका रहेछन् । यसमा विवाद भयो । यसले २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपतिय चुनावमा बाइदेनको सभावित उम्मेदवारीलाई संकटमा पारेको छ । यही न्युजले म झसङ्ग भएँ । मि टु को युग छ, केही न केहीको चिजले भयंकर रुप धारण गर्न बेर छैन । त्यसैले सकभर भर्खरै बस चढेकी यी महिलालाई नछोइयोस् भनेर सतर्क भएँ ।
देशको पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिष्टममा ध्यान गयो मेरो । बसभित्र अलिकति शान्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । तर कहाँ ? बुढानीलकण्ठबाट मिनेट मिनेटमा बस हिडिरहन्छन् । रत्नपार्क, चावेल, कलंकी, लगनखेल, अरु गन्तव्य पनि छन् । यति हुँदा पनि बिचरा यात्रुहरु सिट पाउँदैनन्, होचो माइक्रोबसमा उभिन्छन् र कुप्रिन्छन् । भित्तामै पुगिसक्दा पनि कुप्रिएकै यात्रुलाई ‘पर सर्नुस’ भन्न छाड्दैन कन्डक्टर । दुई जनाको सिटमा तीन, तीन जनाको सिटमा चार जना राख्ने त सामान्य भएको छ । यसले आडम्बरमा बाँच्ने म जस्ता मध्यम वर्गीयलाई मर्का पारेको छ । कुप्रिएर यात्रा गर्न पनि नसक्ने, निजी गाडी बा ट्याक्सी पनि एफोर्ड गर्न नसक्ने । यति मात्र हैन, बेला बेलामा कन्डक्टरले ‘बुवा’ भनिदिन्छ । यो बुवा शब्द आफ्नै बच्चाले भनेसम्म ठिक लाग्छ, खै किन हो, अरुले भन्दा ठिक लाग्दैन मलाई । ‘अंकल’ ठिक छ । तर आजकल बजारमा ‘बुवा’ भन्ने फेसन आएको छ ।
भनिन्छ, सार्वजनिक यातायातका सात तत्वहरु हुन्छन् जसलाई मानिसले महत्व दिन्छ । ती हुन्, गति, आरामीपन, सुरक्षा, लागत, निवासबाट स्टपसम्मको दूरी, गन्तव्यमा पुग्न लाग्ने समय र मान्छेको व्यवहार । यी विषयलाई सम्बोधन गर्दै पश्चिमी मुलुकका सरकारले सार्वजनिक यातायातको जिम्मा आफै लिन्छन् नोक्सा नै बेहोरेर पनि । नेपाल जस्ता केही मुलुकमा चाहिँ यो नाफाको क्षेत्र बन्यो । जनताको कमजोरी निजी क्षेत्रले नाफा गर्ने केन्द्र भएको छ यहाँ । यातायात मात्र किन ? स्वास्थ्य र शिक्षा पनि नाफाका क्षेत्र छन् यहाँ । यो कति उचित हो, सम्बन्धितले ध्यान दिन भ्याएको छैन वा जानी–जानी ध्यान दिएको छैन ।
अब त पश्चिमतिर ‘उवर’ र ‘लिफ्ट’ जस्ता निजी कम्पनीले पनि जनताकै कारको उपयोगबाट जनतालाई सुलभ यातायात सुविधा दिन थालेका छन् । कुनै अटोमोबाइल स्वामित्वमा नराखिकन जनतालाई यातायातको सुविधा दिने संसारकै सबै भन्दा ठुलो कम्पनी छ उबर । तर हामीकहाँ यस्तै सेवा दिन खोज्ने ‘टुटल’ लाई खारेज गर्ने प्रस्ताव लिएर मन्त्री क्याबिनेट मिटिङमा पुगेको समाचार आउँछ । जुन जनताको भोट लिएर सरकारमा पुग्छन् तिनैको हित विपरित निर्णय गर्न आतुर हुन्छन् हाम्रा नेताहरु । ‘हाम्रा नेता र अधिकारीहरुमा सार्वजनिक सेवाको चेत खुलेको छैन’ भन्नुहुन्थ्यो त्रिचन्द्र कलेजका मेरा एक गुरु । उहाँ थप्नुहुन्थ्यो– केको लागि त्यो पदमा पुगेको भन्ने ज्ञान नहुनु जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो’ । यो २०३४ सालतिरको कुरो हो । चार दशक भइसक्यो । पञ्चायतबाट प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा देश प्रवेश गरिसक्यो । तर, बिडम्बना यो कि उनीहरुमा त्यो ‘चेत’ खुलेको छैन । यति त मलाई महसुस छ, सार्वजनिक यातायातमा हुन पर्ने माथिका सात मध्ये धेरै गुणको अभाव छ नेपालमा ।
कुनै शहर भाइब्रान्ट र स्मार्ट बन्नको लागि सार्बजनिक यातायात मेरुदण्ड हो । जनतालाई सुबिधा दिने क्रममा १९०८ सालमा साधारण मानिसले चढ्ने कारको संसारमा उत्पादन हुन थालेको हो र घोडाद्वारा चलाइने साधनलाई कारले बिस्थापित गरेको हो । सार्वजनिक यातायातको दृष्टिले चीन, सिंगापुर, संयुक्त अरब एमिरेट, नेदरल्याण्ड र स्विजरलैण्ड उत्कृष्ट मानिदा रहेछन् । निकृष्टको तथ्यांक भेटिएन, मेरो विचारमा शायद नेपाल पनि होला ।
संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, (केवल कार, रेलवे, हवाइजहाज आदि आइसके । पानी जहाज त धेरै पहिलेदेखि नै थियो । समय परिवर्तनशील छ । वाशिंगटन राज्यको सिटल सहरकी हालकी मेयर जेनी दर्कनले भनिछन्, ‘भविष्यको सुन्दर शहर बनाउनका लागि कारमा हाम्रो निर्भरता घटाउँदै जानु पर्छ’ । साँच्चै हो, मेयरको मुलभुत कर्तव्य भनेको शहरलाई सुन्दर बनाउने प्रयास गर्नु हो । जेनीको भनाइको मतलव हो, सुदृढ र सुलभ सार्वजनिक यातायातले नै कारको उपयोग घटाउन सक्छ । सडकमा कार कम गुड्नु भनेको मानव स्वास्थ्य र वातावरणीय मुद्दा पनि हो । के हामी नेपालमा त्यसो गर्न सकौँला ? सुलभ सार्वजनिक यातायातको अभावमा निजी कार र मोटरबाइक सडकमा बढी गुड्छन् । मोटरबाइक र कारको आयात बढेको बढ्यै छ, ब्यापारी नाफा गरेको गर्‍यै छन् । सरकार राजश्वको अंक हेरेर दङ्दास छ । सरकार र व्यापारीको चेपुवामा परेका छन् साधारण जनता ।
हाम्रो काठमाडौ शहरमा साँझ पर्ना साथ जनताको भागदौड शुरु हुन्छ सार्वजनिक यातायात अर्थात बस र टेम्पोको अघिपछि । जनता निर्धक्क त कहिले पनि हुन पाएका छैनन्, सधै बस चढ्ने हतार छ । ६० बर्ष बर्ष पुगिसकेको हाम्रो सार्वजनिक यातायातको इतिहाँस छ, तर अझै समस्या ज्यूँकात्यूँह त नभनुँ, निकै बाँकी नै छन् । सं १९४८ मा पहिलो कार आइपुगेको नेपालमा सार्वजनिक साधनको रुपमा बसको उपयोग भने सं १९५९ मा तुलाधर ब्रदर्सले शुरु गरेका थिए । । काठमाडौमा समयसँगै बढेको जन घनत्वले सार्वजनिक यातायातको साधनको उपयोग उल्कैसँग बढ्यो । तर, सरकारले जिम्मेबारी लिएन र आजको दुष्कर अबस्थामा ल्याइदियो । निजी क्षेत्रले अत्यधिक नाफा कमाउने, सरकारले चलाएमा घाटै मात्र लाग्ने वास्तविकता छ हाम्रो सार्वजनिक यातायातको ।
बस पुल्चोक पुग्यो । थाहा छ, दाहिनेपट्टि साझा प्रकाशनको प्रधान कार्यालय छ, जहाँ म कुनै बेला निर्वाचित संचालक थिएँ । यो धेरै बर्ष अगाडिको कुरा हो, अहिले त त्यहाँका कसैलाई पनि यसको सम्झना नहोला । तर यतिखेर विश्वेस्वरप्रसाद कोइराला र पारिजातका सबै किताबहरु त्यहाँबाट किन्न मन लाग्यो, किनकि यी किताबहरुको प्रकाशक उही हो । किताब पढ्ने मात्र हैन, नेपाली साहित्यका यी दुई हस्तिको तस्बीर आफ्नो घरको भित्तामा टांग्ने विचारमा छु । तर यी दुईको विपरित राजनीतिक विचारधाराबाट एकैताली प्रभावित ठानिएला भन्ने पीरले ढिलो गर्दैछु । म त यी दुईको साहित्यिक रचनाको प्रसंसक हुँ । सुनेको थिएँ – साझाले यी दुईका सबै किताबको भिन्दाभिन्दै संगालो निकालेको छ । यी किताबहरु फेरि पढ्न रहर जागेको छ । बसबाट ओर्लिएर किताब किन्न जान मन लाग्यो । तर लगनखेल त टाढै छ, यस बसलाई छाडेँ भने अर्को बसमा सिट नपाइएला । साझा चाडै आइपुग्दैन, माइक्रोमा कुप्रिएर जान पर्ने डरले ओर्लिन सकिन ।
पुगेँ लगनखेल । संयोग पनि कस्तो । बस स्टपसँगै करिब करिब जोडिएको घरमा भिएफयसको अफिस रहेछ । बसबाट ओर्लिएर त्यहाँ पुगेँ । क्यानडा, अष्ट्रेलिया, र यूकेको भिसा निवेदन दिने ठाउँ त्यही हो । सिधै क्यानडावाला काउन्टरमा पुगेँ, काउन्टरमा उच्च पहाडी भेगबाट काठमाडौ झरेकी लाग्ने केटी मलाई कुरेर बसेकी झैँ लाग्यो । उनीसँग आफ्नो नाम बताउँदै फुर्तिसाथ पासपोर्ट मागेँ । पासपोर्ट दिने काम त्यति सजिलो नभएको छनक दिँदै उनले मलाई एउटा कम्प्युटर प्रिन्ट (आउट देखाइन् र मसँग त्यस्तै कागज मागिन् । त्यस्तो कागज यही केटीले मलाई पहिले दिएकी सम्झिएँ । मैले उनीसँग त्यो कागज हराएको बताएँ । ‘त्यसो भए पासपोर्ट पाउन सक्नुहुन्न’ केटीले डिक्टेटरियल शैलीमा सिधै घोषणा गरिन् । रिस उठ्यो मलाई, तर गर्ने के ? केटीसँग भनेँ, ‘आफै आएको छु, आइडेन्टिटीको लागि नागरिकता छ । किन त्यो कागज चाहियो ?’ ‘मिल्दैन, त्यो त चाहिन्छ’ उनी आफ्नो भनाइमा अडिग रहिन् । ‘अब के गर्ने त ?’
मेरो रिस घटेको थिएन, तर घटेको जस्तो देखाएँ । ‘निबेदन दिनु पर्छ, त्यसलाई दिल्ली पठाउँछौ, स्वीकृत भएर आएपछि खबर गर्छौ, अनि आउनु होला’ उनले आफ्नो नियम सविस्तार बताइन् । यो त फेरि दुःख पाइने कुरा भयो । अनुरोध गर्दै भनेँ ‘नानी, म टाढाबाट आएको छु, तपाईले आफ्नो अफिसरसँग मलाई भेटाउनोस । कुरा गर्छु, उनले तपाईले जस्तै भने ठिकै छ’ ।
‘अफिसरले भन्ने पनि यही हो, हुँदैन प्लिज’ केटी कठोर भइन् र निवेदन लेख्न कलम र कापी दिइन् ।
अब विकल्प भएन । झगडा गर्ने ? झगडा गरेर के हुन्छ ? हुन्छ त’ भनेर निबेदन दिएर फर्किएँ । फर्किने समय समेत जोड्दा अढाइ घण्टादेखि ३ घण्टाको समय लाग्यो ।
पुनः लगनखेल बसस्टप पुगेँ । बिहान जस्तै बस स्टपमा साझा बस लागिरहेको थियो । यो संजोग हो कि के हो ? सधै यसरी सजिलैसँग साझा बस पाइने त नहोला । उही बस, उही ड्राइभर, उही कन्डक्टर भेटेँ । चिनेको मान्छे भेटे जस्तो भयो । बस चढेँ । कन्डक्टरले आफ्नो यात्रुलाई चिन्यो र सोध्यो–कति चाडै काम सकियो अंकलको ?’
फुक्का हाँसो हाँसे उतिर हेर्दै, केही बोलिन । बुवा नभनेर अंकल भनेकोमा दङ्ग परेँ । पहिलेकै सिट खाली रहेछ, थचक्क त्यसमै बसेँ । ‘कहाँ काम सकिनु ? काम भएन, फेरि आउन पर्ने भयो उही कामको लागि’ यसो भन्न पर्ने थियो कन्डक्टरलाई ।
तैपनि एउटै साझा बस चढेर सुविधापूर्वक बुढानीलकण्ठबाट लगनखेल र लगनखेलबाट बुढानीलकण्ठ पुगेँ,आज यो नै मेरो लागि हर्षको बिषय भयो ।
(नेपाल बैंकको सिईओबाट केही समय अघि अवकाश भएका शाहको फेसबुकबाट)
प्रकाशित ३२ जेठ २0७६ , शनिबार | 2019-06-15 11:47:17